जाडोमा बालबालिकाको स्याहार कसरी गर्ने ? जान्नुहोस् उपाय - Everest Dainik - News from Nepal
जाडोमा बालबालिकाको स्याहार कसरी गर्ने ? जान्नुहोस् उपाय
–साना बालबाबालिकालाई बिहानीपखको घाममा सुताउनुपर्छ । यसबाट उनीहरूलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ ।
–बालबालिकालाई नियमित रूपमा नुहाइदिनुपर्छ ।
–घाममा राखेर तोरी वा नरिवलको तेलले मालिस गरिदिनुपर्छ ।
–मौसमी फलफूल तातो पानीले पखालेर मात्र ख्वाउनुपर्छ ।
–रुघा लागेका बेला नरम कपडा मनतातो पानीले भिजाएर नाक सफा गरिदिनुपर्छ ।
–जाडो भयो भनेर बालबालिकालाई बाक्ला तथा धेरै लुगा लगाइदिनु हुँदैन । त्यसो गर्दा बालबालिकालाई पसिना आएर शरीरमै पसिना सुकेर चिसो लाग्न सक्छ, जसले गर्दा रुघाखोकीले सताउँछ ।